Kooxda Barcelona oo ka hadashay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray Jordi Alba | Radio Wadani News
Home » CIYARAHA » Kooxda Barcelona oo ka hadashay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray Jordi Alba
(Barcelona) 18 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray xiddiga reer Spain ee Jordi Alba inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee taranka Champions League.
Kooxaha Borussia Dortmund iyo Barcelona ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Signal Iduna Park, kulankoodii furitaanka wareega group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah.
Haddaba naadiga reer Catalan ayaa war rasmi ah ay ka soo saareen xaalada Jordi Alba ayaa waxay ku sheegeen inuu dhaawac ka soo gaaray muruqa lugta bidix.
Kooxda Barcelona ayaa bayaankan ay soo saartay waxay ku sheegtay in Jordi Alba uu mari doono baadhitaano caafimaad oo dhameystiran maanta oo Arbaco ah, si loo go’aamiyo heerka saxda ah uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa.
Alba ayaa awoodi waayay inuu sii ciyaaro kulankii xalay ka dhacay garoonka Signal Iduna Park, kaddib dhaawaca soo gaaray qeybta hore ee dheesha, wuxuuna ugu dambeyntii ku qasbanaaday tababare Ernesto Valverde inuu ciyaarta ka saaro daqiiqadii 40-aad, si badalkiisa uu u keensado Sergi Roberto.
Previous: Ciidamada Ammaanka oo gacanta ku dhigay Nin Haweeney toorey ku dilay
Next: Simeone oo amaan ugu qubeeyay Ronaldo kahor kulanka caawa ka dhici doono garoonka Wanda ee tartanka Champions League